Qarax xoogan ayaa maanta waxa uu ka dhacay agagaarka Isgooska KM 4 ee magaalada Muqdisho gaar ahaan meel ku dhaw Bar koontarool oo laga ilaaliyo garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde.
Qaraxan ayaa la sheegay in uu ka dhashay gaari nuuciisu ahaan NOAH oo waxyaabaha qarxa saarnaayeen, waxaana gaarigan la sheegay in uu daba socday labo gaari oo nuuca aan xabaduhu karin oo loo maleenayo inay masuuliyiin la socdeen.
Ninkii waday gaarigan ayaa laga shakiyay kahor inta uusan qarxin, waxaana rasaas lagu riday gaarigan uuna goobtaasi ku dhaawacmay ninkii waday gaariga oo markii dambe kasoo dagay isaga oo sheegaya in uu yahay shacab aan qarax waxba galabsan.
Goobjooge ayaa noo sheegay in Daqiiqado yar kadib iyada oo gacanta lagu hayo ninka gaariga waday uu gaariga qarxay, lamana oga ilaa hada khasaaraha ka dhashay qaraxan ay fashiliyeen ciidamada amaanka.
Taliska ciidamada Booliska Soomaaliya ayaa xaqiijiyey in la qabtay ninkii gaariga waday isagoo dhaawacyo qaba.
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed S/guuto Bashiir Cabdi Maxamed (Ameeriko) oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in labo Qarax ay maanta ka kala dhaceen agagaarka Taaladda Sayidka iyo meel ku dhow Hotel Afriik gaar ahaan Barta-Kontaroolka ee wadada aadda Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Taliye Bashiir Cabdi Maxamed (Ameeriko) ayaa waxa uu sheegay in labada gaari ee Qarxay ay ku raad joogeen ciidanka, islamarkaana iyagoo eryanaya ay Qarxeen,waxaana gaarigan Qaraxa waday Ciidanka ku soo wargeliyay qof shacab ah oo magaciisa ka gaabsady.
June 15, 2019 tuugahaladilo2015